Vans Logo History | Hal-abuurka khadka tooska ah
Vans waa shirkad inta badan u heellan soo saarista kabaha iyo dharka sida funaanadaha dhididka ama funaanadaha. Dhagaystayaasheeda bartilmaameedka ahi waxay diiradda saaraan bulshada skater-ka, marka lagu daro ciyaaraha kale ee magaalooyinka. Astaanta shirkadu waxay dib ugu soo laabanaysaa bilawgii shirkadu markii ay ahayd bakhaar qalabaysan oo ku yaala dugsiyada Maraykanka. Waxay ahayd ilaa 70-meeyadii markii ugu horreysay ee shirkadda la sameeyay.
Maanta, waxaa jira naqshado badan oo kala duwan oo kabaha caanka ah ee Old Skool. Laakiin markii hore saddex nooc oo kabaha kabaha ayaa la sameeyay: buluug, casaan iyo dahab. Si ka duwan summada Vans, kani waxa uu ahaa mid aan isbeddelin tan iyo markii la aasaasay. Maanta Waxaan kuu sheegaynaa taariikhda calaamadda Vans.
1 Taariikhda iyo macnaha astaanta Vans
2 Calaamada farta iyo midabka
3 garaafyada basaska
Taariikhda iyo macnaha astaanta Vans
Vans waa astaanta kabaha iyo dharka-ciyaaraha ee ka guulaysta dhalinyarada iyo ciyaartoyda. Qarsoodi caannimadeeda waxay ku jirtaa falsafadeeda sumadda, maadaama ay diiradda saareyso dadka hoggaamiya qaab nololeed firfircoon, sida kuwa iskeboarders. Shirkaddani waxay shaqaynaysay tan iyo 1966. Magaca wuxuu ka yimid aasaasaha Paul Van Doren laftiisa. Asal ahaan Van Doren, wuxuu sameeyay kabo shiraac ah. Maxaa ka dhigay in ay soo jiitaan dareenka bulshada skater-ka, maadaama ay ahaayeen kuwo tayadoodu aad u wanagsanayen oo ay si fiican isugu darsameen dhar kale. Waxay ahayd markaas in calaamaddu ay bilowday inay si xad dhaaf ah u koraan.
Kabaha ugu horreeya ee Vans kaliya waxay ka kooban yihiin magaca astaanta astaanta, noocani wuxuu socday in ka badan 50 sano, illaa 2016 markii la cusbooneysiiyay isagoo xusaya 50-kii sano ee suuqa. Calaamadda Vans waxaa naqshadeeyay wiil 13 jir ah oo lagu magacaabo Mark Van Doren, wuxuu ahaa wiil uu dhalay mid ka mid ah aasaasayaashii.. Fikradda ayaa timid markii uu sameeyay stencil si uu ugu rinjiyeeyo sabuuradaha. Aabihii, markuu arkay wuxuu sameeyay, gartay garaafkii uu sameeyay, oo wuxuu saaray ciribta kabo. Later, waxay noqon doontaa marka milkiilaha shirkadu uu go'aansado inuu naftiisa u huro gabi ahaanba soo saarista kabaha barafka.
Fikradda Bawlos waxay ahayd inuu abuuro silhouette casri ah, isagoo ka soo qaatay Converse Chuck Taylor. Waxay rabeen inay abuuraan nooc kabo ah oo aan simbiriirixan lahayn oo si fiican u qabsanaya dhammaan noocyada dusha sare. Moodooyinka ugu horreeya waxay ahaayeen kaliya $ 2.49 iyo $ 4.99.
Turjumaada saxda ah ee astaanta waxay ka timid ereyga «Furgonetas" Astaantu waxay ku lifaaqan tahay "V", xarfaha "A", "N" iyo "S", sida haddii ay tahay xidid laba jibaaran. Maxaa ka dhigaya walxaha muuqaalka ugu cajiibsan ee astaanta. Si aad si fiican u fahamto taariikhda astaanta, waa inaad dib ugu noqotaa 70-meeyadii. Laba iskeerayaal, Tony Alva iyo Stacy Peralta ayaa muran dhex maray. Kii ugu horeeyay waxa uu u dabaal degay in uu ku guulaystay in uu gidaar ka noqdo oo uu hawada ka duulo. Nin halkaas joogay oo la odhan jiray Skip Engblom ayaa si dhab ah u yidhi, "Nin yahow, waxaad hadda ka soo baxday gidaarka."
Calaamada farta iyo midabka
Sawirka skateboard-ka lama isticmaalin muddo dheer. Waxay heshay magaca qoolleyda, maadaama qaabkeedu u ekaado qolofka xayawaanka. Dhammaadkii 2016-kii, waxay doorteen inay tirtiraan calaamadda skateboard-ka oo ay ka tagaan oo keliya qoraalka astaanta. Kabaha la sameeyay 60-meeyadii waxay lahaayeen calaamad cad oo ay ku qoran tahay buluug. 2016 waxay doorteen midabka cas ee asalka iyo caddaanka qoraalka. Casaantu waxay astaan ​​u tahay tamarta iyo xiisaha. Halka caddaanku leeyahay macnaha degenaanshaha iyo nadiifnimada. Midabadaan waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu abuuro baahida wax iibsiga ee macaamilka. Hoosta calaamadda waxaa ku yaal astaanta "Darka ka baxsan".
Markii hore, xarfaha calaamaduhu isku mid ma ahayn, laakiin naqshadeeyayaasha ayaa soo afjaray abuurista simmetry. Wajiga nooca loo isticmaalo summada Vans waa nooc wax laga beddelay oo farta Helvetica ah.. Dhammaan xarfaha waa la weyneeyey, iyaga oo samaynaya xaglo qumman. Hadda, summada Vans waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna caansan warshadaha kabaha adduunka oo dhan.
Waxa sidoo kale ka dhigaya shirkaddan in la aqoonsan karo inta badan waa walxaha garaafka ee la socda moodooyinka kabaha ee kala duwan, Mid ka mid ah waxaa loo yaqaan "Jazz Stripe". Bilowgiisii ​​waxay ku bilaabatay doodle ahaan, laakiin waxay ku dhammaatay inay noqoto summad ka diiwaan gashan shirkadda. Waxyaabo kale oo xusid mudan ayaa ah qaabkeeda la hubiyay oo dhowr ka mid ah moodooyinka kabaha kabaha ay leeyihiin, wax ay noocyo badan oo kale isku dayeen inay ku daydaan. Waxa kale oo la sheegay in qaabka joomatari ee Vans sole uu ka yimid caanka caanka ah "Xiddiga Daa'uud", mid ka mid ah calaamadaha Yuhuudda ee muhiimka ah, laakiin tani waa uun xanta.
Haddii aad jeclayd qoraalkan oo aad jeceshahay inaad ogaato taariikhda calaamadaha caanka ah ee caanka ah, halkan waa isku xirka maqaal kale oo aan kuu sheego sheekada ku saabsan astaanta caanka ah ee Amazon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Taariikhda astaanta Vans